यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनामा करिब ६० हजारले अस्थायी रोजगारी पाउने | Ratopati
यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनामा करिब ६० हजारले अस्थायी रोजगारी पाउने
personशम्भु दंगाल exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १७, २०७७ chat_bubble_outline0
प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा थालिएको छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि अनलाइनमार्फत गणक र सुपरिवेक्षकको विज्ञापन खोलिने छ । अघिल्लो पटक जस्तो अगामी जनगणनमा शिक्षकलाई प्रयोग नगरिने भएको छ यद्यपि सुपरिवेक्षमकमा भने शिक्षकलाई राखिने भएको छ । गणकमा भने बेरोजगार रहेका युवायुवतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी छ ।
निर्देशक लामिछानेले भने– ‘हामी अनलाइन भर्ना प्रक्रिया खोल्छौँ, त्यसका लागि एक, दुई महिनाको समय दिन्छौँ । गणकहरुमा स्थानीय तहको आवश्यकताका आधारमा हामी मान्छे लिन्छौँ । हामीले केन्द्रबाट, जिल्लाबाट पठाउने हैन, स्थानीय तहमै बसोबास गर्ने मान्छेलाई लिन्छौँ । अनलाइनमा आवेदन परेपछि सर्ट लिस्टमा राखेर जिल्लाले भर्ना गर्छ । गणकका लागि १२ कक्षा पास भएको हुनुपर्छ । सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्छ ।’
सामुदायिक प्रश्नवली वडा कार्यालयलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरिने, वडामा स्वास्थ्य सुविधा कस्तो छ ? स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ? विपदको जोखिमको अवस्था कस्तो छ ? वडामा सहरीकरणको अवस्था कस्तो छ ? लगायतका वडा कार्यालयलाई समेत प्रश्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै जिल्ला जनगणना समन्वय समिति रहन्छ । जसको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने निर्देशक लामिछानेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘यो पटक कर्मचारी हामी आफैले लिएर काम गर्छौं । हामीले आँकडा सङ्कलन गरेको ६ महिनाभित्रमा डाटा इन्ट्री गरिसक्छौँ भने ९ महिनाभित्रमा नतिजा निकाल्छौँ । मुख्य मुख्य तथ्याङ्क विवरण ९ महिनाभित्रमा निकाल्छौँ । विगतमा करिब करिब २ वर्ष पनि लागेको थियो । बढीमा ९ महिना लगाउने त्यसभन्दा माथिको समय नलाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’
उनले भने– ‘पहिला प्रतिवेदनहरु तल्लो तहका रूपमा आउँदैनथ्यो, यस पटकबाट हामीले वडा स्तरमा पनि निकाल्छौँ । पहिले नतिजा प्रकाशनमा मोनोग्राफ भनेर ठूलो किताब निकाल्थ्यौँ, यस पटक हामीले विषयगत रूपमा प्रतिवेदन निकाल्छौँ । त्यो विषयगत भनेको विभिन्न प्रकारका विषय हुन्छ जुन चाहिँ राज्यलाई नीति निर्माण गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले बनाइनेछ । शिक्षाको बारेमा अलग्गै प्रतिवेदन निकाल्छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा अलग्गै प्रतिवेदन निकाल्छौँ । प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा छुट्टै प्रतिवेदन निकाल्छौँ ।’
विगतको भन्दा फरक ढङ्गले अभ्यास गर्दै फरक फरक विषयमा प्रतिवेदन निकाल्ने र ती सामग्री अनलाइनबाट समेत हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
ताप्लेजुङको मिक्वाखोलामा काँग्रेस विजयी
लुम्बिनीमा ‘चेयर फर बुद्धिस्ट स्टडिज’ स्थापना गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्णय